Cabbir (Sq Ft): 2178.008
Meel aan caadi ahayn oo wanaagsan oo ku taal bartamaha Wadada Kulliyadaha badankeed ee loo yaqaan 'Executive Block' ee Xarunta xisaabaadka milatariga ee Bulshada Masjid iyo Park. Naqshad qurxoon leh oo ay la socoto Shaqada Farshaxanka Isbaanishka iyo Qalabka Dibedda laga keenay. Macaamiisha qaaliga ah ee ixtiraamka leh waxaan ku fulinaa dalabaadkaaga daacadnimo, Daacadnimo waxaana ku siinaynaa xarumo badan. Waxaad si cabsi la'aan ah Aamusnaan kartaa. Tilmaamaha waa: - 05 Musqulaha Master-ka oo leh Nooca Qubayska Mareykanka ee kuxiran- 2 Qolka Dukaanka ee Loogu Talagalay - 01Daajis La Cunista Qubayska - 02 Qolka Quruxda Badan - 02 American Style jikada - Alwaax Alwaax Alqiraah- Muhiimad Siinta Fayadhowrka- 07 Musqusha- Meelaha Gawaarida gawaarida ee Wejiga Hore - Warqado yaab leh oo sawir gacmeedyo ah iyo Qolka Loogu Talagalay - Quarter Serper servier Quarter oo leh Kala Dabaalitaan Musqusha iyo qolka qubayska iyo waxyaabo kale oo badan oo qarsoon ayaa sidoo kale la heli karaa, nala soo xiriir oo booqo gurigaan. Dukaamaynta Macaamiisha #Good waa Ujeeddadeenna # WeBuildTrust # guryaha # guryahaJinnah Associates